Filtrer les éléments par date : mercredi, 18 novembre 2020
mercredi, 18 novembre 2020 22:13
Naleo Malagasy hafahafa hoy Sinoa
Pilo kely : Naleo Malagasy hafahafa hoy Sinoa
Omby miasa, kapohina, ho anina.
Alika tsy miasa, safosafona, tsy ho anina.
Bonne nuit naleo
mercredi, 18 novembre 2020 12:55
Fifohana sigara sy fihinanana paraky : Anisan'ny loza mitatao ho an'ny fahasalamam-bahoaka
8 tapitrisa isan-taona eo ireo olona maty vokatry ny fifohana sigara sy fihinanàna paraky maneran-tany, 6 hetsy ireo namoy ny ainy vokatry ny fievohana setro-tsigara.
Raha ireo antontan'isa ireo no jerentsika dia anisan'ny loza mitatao ho an'ny Fahasalamam-bahoaka, tsy eto amintsika irery ihany, fa maneran-tany mihitsy ny fifohana sigara sy fihinanana paraky, koa manentana ny tsirairay samy handray ny andraikitra tandrify azy manoloana izany ady izany.
mercredi, 18 novembre 2020 09:13
Toamasina: Misitraka tetik’asa maro
Tonga aty Toamasina ny Delegasiona avy amin’ny Fiadidiana ny Repoblika sy mpikambana amin’ny Governemanta izay tarihin’ny Filoha Andry Nirina RAJOELINA.
Eo an-daniny ny fanatrehana ny lalaon’ny ekipam-pirenena BAREA, dia manana fandaharam-potoana mafonja ny Fitondram-panjakana. Dia lanonam-pitokanana sy fitsidihana asa goavana eto an-drenivohitra Betsimisaraka sy ny manodidina :
mercredi, 18 novembre 2020 09:12
Toamasina : Fitsidihan’ny Masoivoho Japoney
Nitsidika an'i Toamasina ny masoivohon'i Japon miasa sy monina eto Madagasikara, son excellence HIGUCHI Yoshihiro, "Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire".
Zava-dehibe ho an'ny tanànan'i Toamasina ary ho an'ny faritra Atsinanana izao fitsidihana ara-pomba ofisialy izao hoy ny Governora RAFIDISON Richard Théodore, raha nandray an'ity olo manan-kaja tao amin'ny birao fiasany, niaraka tamin'Andriamatoa Préfet RAZAFIARISON Jean Jugus sy Andriamatoa Ben'ny Tanana RAKOTONIRINA Nantenaina ary Andriamatoa Sekretera Jeneraly BEMAHEFA Gervais izy ny talata 17 novambra maraina.
Voatanisa nandritra ny teny sy hevitra nifanakaloza ireo zava-bita sy tetik'asa idiran'ny fanjakàna Japoney mivantana ato anatin'ny faritra: